Asambodo na Ọzụzụ Social Media
Agorapulse Academy: Nwee akwụkwọ na Social Media
Kemgbe ihe karịrị afọ iri, abụrụla m onye ọrụ ike na onye nnọchi anya mba Agorapulse. Can nwere ike pịa site na ederede zuru ezu, mana m ga-ekwughachi na ọ bụ usoro njikwa njikwa mmekọrịta mmekọrịta kachasị mfe na ahịa. Agorapulse jikọtara ya na Twitter, Facebook, Facebook Pages, Instagram, na Youtube.
Companylọ ọrụ ahụ dịkwa ịtụnanya, na-enye ndụmọdụ, atụmatụ, na nkwalite mgbe niile na-esite na mmalite ya. Ihe ozo di egwu nke Agorapulse nwere bu ulo akwukwo ha ebe ha na enye gi asambodo asambodo nke gunyere ibiputa akwukwo ndi mmadu, njikwa ndi mmadu, ige nti na ntaneti na ntaneti.
Mmụta na Ọzụzụ Social Media
Golọ akwụkwọ Agorapulse bụ ezigbo maka ahịa ọkachamara ndị ọhụrụ na-elekọta mmadụ media ma ọ bụ chọrọ ka ịgbakwunye ha ẹdude ihe ọmụma na ruo-ụbọchị courseware. Nke kachasị mma, agụmakwụkwọ bụ Uzo mkpirisi (nke ahụ bụ aha aha ahụ) nke na-agwakọta ikpo okwu yana atụmatụ ụlọ ọrụ gị ma ọ bụ ndị ọrụ ga-aga nke ọma.
Usoro a jikọtara vidiyo na ndị isi ụlọ ọrụ, ihe mmụta, wee wee jegharị gị site na itinye ụkpụrụ ma ọ bụ atụmatụ dị n'ime ikpo okwu Agorapulse. Ndị a bụ isi:
Ngwaọrụ Mgbasa Ozi - isi nke a gụnyere mbipụta na profaịlụ otu ma ọ bụ karịa, ịhazi usoro na ijikwa usoro edere ahaziri, iwu otu ibipụta akwụkwọ, kwụ n'ahịrị na ijikwa posts kwụ n'ahịrị, bulite ọtụtụ ọdịnaya, arụ ọrụ otu, kalenda ndị ọzọ, itinye akwụkwọ mkpesa, yana iji ngwa mkpanaka na ndọtị chrome. .
Ijikwa mkparịta ụka mmekọrịta - igbe nnabata mgbasa ozi mmekọrịta, ịnakọta nkọwa mgbasa ozi, ime ihe na nzacha, nzaghachi na nyocha, ịchekwa azịza, ịdebanye aha, ịdebanye aha, ịzobe, na ịnye nzaghachi, iji enyemaka igbe ozi, yana ndị ọrụ njirimara.
Nkwado Mgbasa Ozi - ịlele akụkọ, mbupụ akụkọ, ịrụ ọrụ na aha mmado, yana iwulite akụkọ banyere ike ụlọ.
Ntị na-elekọta mmadụ - na-ege ntị site na netwọkụ mgbasa ozi na-elekọta mmadụ (belụsọ Facebook na LinkedIn nke na-agaghị ekwe ya), nlekota na imelite echiche, site na profaịlụ gị, site na ịdeghị aha, ma ọ bụ isiokwu, site na URL, yana ijikwa nsonaazụ ntị gị.
Onye ọ bụla nke isi na-ejedebe na omume ajụjụ (nke na-adịghị emetụta gị asambodo udomo oro) ma na-enye gị ihe ọmụma na ị nwere ike iji retake. Enwekwara ihe ndị a tụrụ aro ka ị banye na akaụntụ Agorapulse ị ga-ewere.
Akwụkwọ asambodo a na-anwale ihe ọmụma gị banyere ihe dị mkpa nke elekọta mmadụ media ahịa na ndị na-arụ ọrụ mgbasa ozi kwesịrị ịma. Ing gafere ule a ma nweta asambodo gị ga-enye gị ohere igosipụta ikike gị na nka na mgbasa ozi mmekọrịta wee bụrụ onye na-eme Agorapulse.
Agara m ihe ọmụmụ ahụ taa na Abụ m (na eze) ọkachamara na Agorapulse!
Debanye ugbu a maka Agorapulse Academy
Ngosi: Abụ m onye nnọchi anya gọọmentị Agorapulse na Mgbakwunye.
Tags: asambodoasambodo mgbasa ozi mmekọrịtaklas mgbasa ozi mmekọrịtaelekọta mmadụ media N'eziemmụta mgbasa ozi mmekọrịta
Software dị ka Ọrụ (SaaS) Ọnụ ọgụgụ ọnụego maka 2020
Oge erugo ibuli RSS gị nke ndị nwụrụ anwụ
Ọkt 25, 2011 na 5:46 AM
Ọ dị mma ịmara!